Indawo entle yaseWaterfront eChestertown Getaway
Igumbi elithandekayo elinamagumbi amathathu angaphambili emanzini / indawo yeendwendwe efumaneka ngokulula kwimizuzu ukusuka kwimbali yaseChestertown kunye neKholeji yaseWashington. Iimbono ezintle zamanzi, ikhitshi eligcweleyo, indawo enemithi, indawo yokuhlala ezolileyo, ukubukela iintaka, ukukhwela ibhayisekile, ukubaleka, ukukhwela inqanawa. Izilwanyana zasekhaya ezinobubele (ezikhululekileyo nabantu kunye nenja yethu yokuhlangula ephakathi) zamkelekile. Sinikela nge-5% yengeniso kwi-Kent Attainable Housing, i-Animal Care Shelter yase-Kent County okanye i-ShoreRivers ulondolozo-ukhetho lwakho. Yenze ibe likhaya lakho kude nekhaya.
Igumbi leendwendwe elikumgangatho ophantsi lidibana nendlu enkulu kodwa linikezela ubumfihlo obupheleleyo kunye ne-driveway eyahlukileyo kunye nokungena. Imigangatho yokhuni oluqinileyo, impahla etofotofo, iWiFi, iSmart TV enokufikelela kwiNetflix kunye neAmazon Prime, iindlela ezahlukeneyo zolawulo lokufudumeza kunye nomoya womoya ovela kwi-eco-friendly geothermal system. Yonwabela iimbono zamanzi ezithandekayo ukusuka kwigumbi lokuhlala, igumbi lokulala elipholileyo elinebhedi yokumkanikazi, isinxibo, kunye negumbi elaneleyo lokuhlala, kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nekofu kunye neti. Igumbi lokuhlala linesofa yokulala yokuhlalisa abantwana ababini okanye iindwendwe (nceda uqhagamshelane nathi malunga neenkcukacha). Ababukeli beentaka bayakonwabela iintlobo ezininzi, kubandakanya amadada, amarhanisi, i-osprey, amaxhalanga anempandla, iihempe ezinkulu eziluhlaza kunye nezikhova.
Yindawo yokuhlala encinci, ezolileyo kwaye enobuhlobo kakhulu. Kukho ipaki encinci enezixhobo zebala lokudlala, idokhi, kunye nolwandle olunesanti umgama wemizuzu emi-3. Yiza neebhayisekile zakho, izithuthuthu, izihlangu zokubaleka.